अध्याय ७१ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मैले पूर्ण रूपले आफैलाई तिमीहरू सबैमा प्रकट गरिदिएको छु, तर किन तिमीहरूले मेरा वचनहरू तिमीहरूको सारा हृदय र प्राणले मनन गर्न सक्दैनौ? किन तिमीहरू मेरा वचनहरूलाई फोहोर-मैलाको रूपमा लिन्छौ? के मैले भन्‍ने कुरा गलत हो र? के मेरा वचनहरूले तिमीहरूको कमीकमजोरीहरूलाई प्रहार गरेको छ? तिमीहरूले निरन्तर ढिलाइ गरिरहेका छौ र हिचकिचाइरहेका छौ। किन तिमीहरू यस प्रकारले काम गर्छौ? के मैले स्पष्ट रूपले बोलेको छैन र? मैले धेरै पल्ट भनेको छु, मेरा वचनहरूलाई होशियारीपूर्वक मनन गरिनुपर्छ, अनि तिमीहरूले त्यसलाई नजिकबाट ध्यान दिनुपर्छ। के तिमीहरूमध्ये कोही आज्ञाकारी र समर्पित छोराछोरीहरू हौ? के मेरा वचनहरू व्यर्थमा गएका छन्? के त्यसले कुनै प्रभाव परेको छैन? तेरो कति भाग मेरो इच्छाअनुरूप छ? यदि, एक क्षणको लागि, म तँसित बोलिनँ भने, तँ स्वच्छन्द र अनियन्त्रित हुनेछस्। यदि मैले स्पष्टसित तैँले कसरी चल्नु र बोल्नुपर्ने हो भनी बताइनँ भने, तेरो हृदयको गहिराइमा यसको बारेमा तँलाई केही थाहा हुँदैनथियो भन्‍ने हुनसक्छ? म तँलाई बताउँछु! हानि सहने त्यो हो जो अनाज्ञाकारी हुन्छ, जो अधीनमा रहँदैन, अनि जसले मूर्खतापूर्ण विश्‍वास गर्छ! मैले भनेको कुरालाई ध्यान नदिनेहरू अनि विवरणहरूलाई बुझ्न नसक्‍नेहरूले मेरा अभिप्रायहरूलाई बुझ्न सक्नेछैनन्, न त तिनीहरूले मेरो सेवा नै गर्न सक्नेछन्। यस्ता मानिसहरूलाई म निराकरण गर्नेछु, अनि तिनीहरूले मेरो न्यायको सामना गर्नेछन्। विवरणहरू नबुझ्‍नु भनेको अत्यन्तै धृष्ट हुनु, साथै जानी-जानी दुःसाहसी हुनु हो; त्यसकारण, म त्यस्ता मानिसहरूलाई घृणा गर्नेछु, अनि तिनीहरूसित सहजतापूर्वक व्यवहार गर्नेछैन। म तिनीहरूलाई कुनै कृपा देखाउनेछैन; म तिनीहरूलाई केवल मेरो प्रताप र न्याय मात्रै देखाउनेछु। त्यसैले, तैँले अझै मलाई धोका दिने साहस गर्छस् कि हेर्। म मानव हृदयको अन्तस्करणको गहिराइलाई जाँच्ने परमेश्‍वर हुँ। यो कुरा सबैको निम्ति स्पष्ट हुनुपर्छ; नत्रभने, तिनीहरूले गैरजिम्मेवार तरिकाले आफ्नो काम गर्नेछन् अनि मसित लापरवाहीपूर्वक व्यवहार गर्नेछन्। त्यही कारणले गर्दा कतिपय मानिसहरू अन्जानमा मद्वारा प्रहार गरिन्छन्। मैले भनेको छु, कि म कसैलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने छैन, म कसैलाई गलत व्यवहार गर्दिनँ, अनि मेरा सबै कार्यहरू मेरो हातको बुद्धिमानी व्यवस्थापनहरूद्वारा गरिन्छन्।
मलाई साँचो प्रकारले प्रेम नगर्ने सबै मानिसहरूमाथि मेरो न्याय परेको छ। ठ्याक्कै यही समयमा, कसलाई मैले पूर्वनियुक्त गरेको छु र चुनेको छु अनि को चाहिँ मेरो निष्कासनको निशाना हुनेछन् भन्‍ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यी सबै एक-एक गरेर प्रकट हुनेछन् अनि केही पनि लुकेर रहनेछैनन्। सबै मानिसहरू, घटनाहरू, अनि कुराहरू मेरा वचनहरूको परिपूर्णतामा ल्याउनको निम्ति खडा र अस्तित्वमा छन्, र ती सबै मेरो मुखबाट उच्चारण भएका वचनहरूलाई साँचो बनाउन व्यस्त छन्। ब्रह्माण्ड र पृथ्वीका कुनाकाप्चाहरू केवल मद्वारा नियन्त्रित छन्। मेरा वचनहरूलाई अवज्ञा गर्न साहस गर्ने वा मेरा कामहरूलाई प्रदर्शित गर्न इन्कार गर्नेलाई मैले प्रहार गर्नैपर्छ, अनि त्यस व्यक्तिलाई अधोलोकमा डुब्न लगाएर अस्तित्व नै नरहने तुल्याउनुपर्छ। मेरा सबै वचनहरू सुहाउँदो र उचित छन्, अनि पूर्ण रूपले अशुद्धतारहित छन्। के तिमीहरूको बोल्ने तरिका मेरो जस्तो छ? तँ अति शब्दाडम्बरी छस्; तेरो कुरा तर्कसङ्गत छैन, अनि तैँले आफैलाई स्पष्ट प्रकारले व्याख्या गर्दैनस्—तापनि, तँ अझै तैँले केही कुराहरू हासिल गरेको छस्, अनि त्यसलाई तैँले लगभग पाएको छस् भन्‍ने सोच्छस्। म तँलाई भन्छु! मानिसहरू जति बढी आत्म-सन्तुष्ट हुन्छन्, तिनीहरू मेरा मापदण्डहरू पूरा गर्नदेखि त्यति नै टाढा हुन्छन्। तिनीहरू मेरो इच्छाको निम्ति कुनै वास्ता देखाउँदैनन्, अनि तिनीहरूले मलाई छल्छन् अनि मेरो नाउँलाई गम्भीरतापूर्वक अनादर गर्छन्! कति निर्लज्ज! तँ आफूसित कस्तो प्रकारको कद छ भन्‍ने कुरालाई हेर्दैनस्। तँ कति मूर्ख र अज्ञानी छस्!
मेरा वचनहरूले लगातार अनि हर प्रकारले कामकुराहरूलाई औँल्याइरहेका छन्। तैँले अझै यसलाई बुझ्न नसकेको हो कि? के तैँले अझै बुझिनस्? के तेरो अभिप्राय मलाई निराश तुल्याउनु हो? तेरो आत्मालाई माथि उठा अनि तेरो साहसलाई माथि खिँच। मलाई प्रेम गर्ने एउटै व्यक्तिलाई पनि म दरिद्रतापूर्वक व्यवहार गर्दिन। म मानव हृदयको अन्तर्मनको गहिराइलाई जाँचपडताल गर्दछु, अनि सबै मानिसहरूको हृदयमा के छ भनी म सबै कुरा जान्दछु। यी सबै कुराहरू एक-एक गरेर प्रकट हुनेछ, अनि ती सबै मद्वारा जाँचिनेछन्। मलाई साँचो प्रकारले प्रेम गर्ने एउटैलाई पनि म कहिल्यै बेवास्ता गर्नेछैन; तिनीहरू सबै आशिषका प्रापकहरू हुन्, अनि ज्येष्ठ पुत्रहरूको समूह हुन् जसलाई मैले राजाहरूको रूपमा पूर्वनियुक्त गरेको हुँ। मलाई साँचो प्रकारले प्रेम नगर्नेहरूको सम्बन्धमा चाहिँ, तिनीहरू आफ्नै छलहरूको निशाना हुन्, अनि तिनीहरूले दुर्भाग्य भोग्नेछन्; यो पनि मद्वारा पूर्वनियुक्त गरिएको कुरा हो। चिन्ता नगर; म तिनीहरूलाई एक-एक गरेर प्रकट गर्नेछु। मैले पहिले नै यो काम राम्ररी तयार गरेको छु, अनि मैले यो गर्न सुरु गरिसकेको छु। यो सबै व्यवस्थित ढङ्गले गरिँदैछ; यो अस्तव्यस्त छँदै छैन। कसलाई चुनिनेछ, कसलाई हटाइनेछन् भनी मैले पहिल्यै निर्णय गरेको छु। तिमीहरूले देख्ने गरी तिनलाई एक-एक गरेर प्रकट गरिनेछ। यी समय अवधिमा, मेरो हातले के गर्दैछ भनी तिमीहरूले देख्नेछौ। सबै मानिसहरूले देख्नेछन्, कि मेरो धार्मिकता र प्रतापले कसैबाट कुनै उल्‍लङ्घन वा विरोध आउन दिनेछैन, र ज-जसले ठेस उल्‍लङ्घन गर्छ, त्यसलाई कडा दण्ड दिइनेछ।
म हरेकको हृदयको अन्तर्मनको गहिराइलाई खोजी गर्ने परमेश्‍वर हुँ। मलाई केवल बाहिरबाट नहेर। अन्धा मानिसहरू! तिमीहरूले मैले अति स्पष्टसित बोलेको वचनहरूलाई सुन्दैनौ, अनि तिमीहरूले मलाई—पूर्ण परमेश्‍वर स्‍वयम्‌लाई—विश्‍वास गर्दैनौ। जसले मलाई छलपूर्ण रूपमा फुस्ल्याउने गर्छ वा मबाट केही लुकाउँछ, म निश्चय नै त्यसलाई सहनेछैन।
के तैँले मेरो वाणीहरूमध्ये हरेकलाई सम्झन्छस्? “मलाई देख्नु अनन्तदेखि अनन्तसम्म लुकेको हरेक रहस्यलाई देख्नु जस्तै हो।” के तैँले यो कथनलाई होशियारीपूर्वक मनन गरिस्? म परमेश्‍वर हुँ, अनि मेरा रहस्यहरू तैँले देख्‍ने गरी प्रकट गरिएका छन्। के तिमीहरूले त्यसलाई देखेका छैनौ। किन तिमीहरूले मलाई ध्यान दिँदैनौ? अनि किन तैँले तेरो मनमा भएको त्यस अस्पष्ट परमेश्‍वरलाई त्यति आराधना गर्छस्? कसरी म—एउटा साँचो परमेश्‍वर—ले कुनै गल्ती गर्न सक्छ? यसलाई तिमीहरूको मगजभित्र जान देऊ! यसको बारेमा सुनिश्चित होऊ! मेरो हरेक वचन र कार्य, मेरो हरेक काम र चाल, मेरो मुस्कान, मेरो खवाइ, मेरो लवाइ, मेरो सबै कुरा परमेश्‍वर स्‍वयम्‌द्वारा हुन्छ। तिमीहरूले मेरो आलोचना गर्छौ: के तिमीहरूले मेरो आगमनअघि नै परमेश्‍वरलाई देखिसकेका छौ? यदि होइन भने, किन तँ सधैँ म र तेरो परमेश्‍वरको बीच मानसिक तुलना गर्छस्? यो पूर्ण रूपले मानव धारणाहरूको उपज हो! मेरा क्रिया तथा व्यवहारहरू तेरा कल्पनाहरूसित मिल्दैनन्, मिल्छन् त? मेरा क्रिया तथा व्यवहारहरू साँचो छन् कि छैनन् भनी म कुनै व्यक्तिलाई पनि विचार गर्न दिँदिनँ। म एक मात्र साँचो परमेश्‍वर हुँ, अनि यो अपरिवर्तनशील र अकाट्य सत्यता हो! तेरा आफ्नै छलहरूको शिकार नहोऊ। मेरा वचनहरूले यसलाई पूर्ण स्पष्टतासहित औँल्याएका छन्। मभित्र एक टुक्रा मानवता पनि छैन, म सम्पूर्ण रूपले परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ हुँ, अनि एउटै कुरा पनि नलुकाई तिमीहरूका निम्ति पूरै प्रकट गरिएको छ।
अघिल्लो: अध्याय ७०
अर्को: अध्याय ७२